Ngiyaxolisa Careerbuilder! IFilm ithwala amaSuper Bowl Commercials | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 5, 2007 NgoMsombuluko, Februwari 5, 2007 Douglas Karr
Kulungile, angikuthandi abakwa-Careerbuilder abaphethwe yiphephandaba ngivumela okungcono kakhulu kimi. Ukube ngenze okunye ukuqaphela, bengizothola ukuthi iFilm inamalungelo okusabalalisa amafilimu. I-Youtube ayizange. Ngakho-ke - nazi izikhangiso zami engizithandayo ze-Super Bowl ka-2007
Ngiyaxolisa Careerbuilder! (Noma ngisacabanga ukuthi kufanele ube nokusatshalaliswa okuphelele nokukhululekile kwezikhangiso zakho nganoma yimuphi umphakathi we-inthanethi wokuxhumana nabantu)
Ukubuka zonke izikhangiso ze-Super Bowl zango-2007, nakhu ke: